Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Zon’olombelona tamin’ny Jolay 2010
Zon'olombelona · Jolay, 2010
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jolay, 2010
21 Jolay 2010
Mpanoratra Sinisa Boljanovic · Eoropa Afovoany & Atsinanana
19 Jolay 2010
17 Jolay 2010
Mpanoratra Slim Amamou · Tonizia
14 Jolay 2010
Koety: Amidy ny blaogiko
Araka ny efa nampoizina, vaovao nampitain'ny gazety an-tsoratra iray ao an-toerana dia mianatra manara-maso ny blaogy ny governemanta Koetiana ary tsy nankasitrahan'ireo mpitoraka blaogy izany. Nanapa-kevitra ny hiatrika izany vaovao mandeha izany ny iray amin’ireo mpitoraka bilaogy malaza nilaza fa amidy ny bilaoginy. Nararaotin'ny mpamaky izany hanehoana malalaka ny heviny.
03 Jolay 2010
Egypta: Miketrika valifaty ny Minisitry ny atitany
Nampiasa ny media amin'ny aterineto ireo mafana fo Egyptiana amin'ny fampiharihariana tanteraka ny kolikoly sy ny fampijaliana ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Marwa Rakha manoratra mikasika ny fihetsehan'izy ireo niseho vao haingana ary manala sarona ny tranga mikasika ny mafana fo Egyptiana iray voatazona tany Libya ato amin'ity lahatsoratra ity.
01 Jolay 2010
Misarika ny fifantohan-tsain'izao tontolo izao ilay fiparitahan'ny solitany tany amin'ny Elodranon'i Meksika, vokatr'izay fanapotehana noho ny tsy fahaiza-mitantana ny fitrandrahana solitany. Na izany aza, any amin'ireo toerana sasany maneran-tany, miaina miaraka amin'ny fandrarahana poizina toy itony ny olona, ary amin'ny alalan'ny horonantsary no hiezahan'ny vahoaka hisintonana ny sain'izao tontolo izao...
Mpanoratra Tarek Amr · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana